डबली विशेष - Page4of 24 - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and morewww.khabardabali.com | Page4डबली विशेष - Page4of 24 - www.khabardabali.com
काठमाडौं । हिन्दु समुदायमा होली कहिलेदेखि मनाउन थालियो र रंग कहिलेदेखि खेल्न थालियो त्यसको एकिन छैन् । तथापि होली र रंगबारे भने निकै कथाहरु भेटिन्छन् । साथै परम्परा नै बनेको होली र रंगखेल्ने बारे पनि फरक–फरक तथ्य...
काठमाडौं । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३८ को उपधारा (४)मा महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिताको हक हुने कुरा उल्लेख छ । तर यो नीतिमा मात्रै छ तर कार्यान्वयन भने छैन् । नेपालको संविधानले...
फागुन २५ गते, २०७६ - १२:५५
विश्वकै कान्छी प्रधानमन्त्रीको गुनासो, ‘मलाई प्रधानमन्त्री होइन् ‘महिला प्रधानमन्त्री’ भनेर सम्बोधन गर्छन्’
काठमाडौं । फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री सना मरीन मात्र ३४ वर्षकी छिन् । यति कम उमेरमा प्रधानमन्त्री बन्ने उनी विश्वकै एक मात्रै महिला नेतृ हुन् । १९ सदस्यभएको उनको क्याबिनेटमा १२ महत्वपूर्णं मन्त्रालयको जिम्मेवारी...
फागुन २२ गते, २०७६ - १२:३८
डा. रविन्द्र पाण्डेको सुझाव –कोरोनाबाट कसरी बच्ने र के गर्ने ?
काठमाडौं । संसारभर चीनको बुहानबाट उत्पत्ति भएको कोरोना भाईरसको सन्त्रांस छाएको छ । कोरोनाका बारेमा मानिसहरुले आफआफ्नै धारणा र अड्कलबाजी लगाउने पनि गरेका छन् । त्यतिमात्रै नभएर उपचारका बारेमा घरेलु औधषीका...
फागुन २१ गते, २०७६ - १८:०५
काठमाडौं । कुनै बेला बन्दुक बोकेका पूर्व नेकपा माओवादीका नेता एवं पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र विष्टका हातमा अहिले विहान बेलुकै कुटो, कोदालो देखिन्छ । छपन्न वर्षीय विष्ट गएको चार वर्षदेखि कृषि पेशामा रमाएका छन् । तुलसीपुर...
फागुन २१ गते, २०७६ - १४:४४
कोरोनाको त्रास बढिरहे ठूला होटलहरुलाई ‘रेस्क्यू’ गर्ने अवस्था आउँछ
म अहिले पोखरामा छु । अहिले लेकसाईड शुन्य जस्तै छ । लेकसाईडका सडकहरु खाली छन् । फेवातालमा डुंगामा शयर गर्ने मान्छेहरु छैनन् । अहिले लेकसाईडका होटल तथा रेष्टुरेण्टहरुमा पर्यटकहरु छैनन् । पर्यटन व्यवसायी घाम तापेर...
फागुन २० गते, २०७६ - १६:२०
कोरोनाबाट कसरी जोगिने ? अपनाउनुहोस् यी १० तरिका
काठमाडौं । चीनबाट फैलिएको खतरनाक कोरोना भाइरसले अहिले विश्वभर त्रासदीको अवस्था निर्माण गरेको छ । यस खतरनाक भाइरसले अहिलेसम्म ३ हजारभन्दा बढिको ज्यान लिएको छ भन्ने १ लाख हाराहारीमा मानिसहरु बिरामी भएका छन् । तर...
फागुन २० गते, २०७६ - १३:२३
प्रधानमन्त्री ओलीले किन आफन्तबाटै लिए मिर्गौला ? के छ नेपालको कानूनमा अङ्ग दिने लिने व्यवस्था ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि सोमबार साँझदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा छन् । उनको भोली (बुधबार) मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने कार्यक्रम छ । १३ वर्षअघि फेरेको मिर्गौलाले काम...
फागुन १६ गते, २०७६ - १६:५२
काठमाडौं । गत शनिबार सम्पन्न नेकपा सचिवालय बैठकले केहि महत्वपूर्णं निर्णय लिएसँगै नेकपाभित्र ठुलो उथल पुथल देखिएको छ । सचिवालय बैठकका केहि निर्णयलाई अतिरञ्जित रुपमा बाहिर ल्याइएसँगै नेकपाभित्र डरलाग्दो उथल...
फागुन १५ गते, २०७६ - १२:१७
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ०७२ असोज २४ मा नेपालको ३८ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलो पटक सिंहदरबार छिर्दै गर्दा भारतले नेपालमाथि आघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको नयाँ...